“अनमोल केसी मेघास्टार होईन” :- रमेश उप्रेती / बिपना – Todays Nepal
“अनमोल केसी मेघास्टार होईन” :- रमेश उप्रेती / बिपना
‘होस्टल’बाट नेपाली सिनेक्षेत्रमा भित्रिएका लोकप्रिय एवं चर्चित नायक अनमोल केसीको स्टारडम र लोकप्रियता देखिँदै आएको छ । डेब्यु देखि लिएर ‘कृ’ सम्म आईपुग्दा व्याक टु व्याक हिट फिल्म दिएका अनमोलको क्रेज कस्तो छ भन्ने कुरा उनको फिल्म हलमा रिलिज हुँदा देखिएको हुल र उनले दिएका अन्तरवार्ताहरुसमेत ट्रेण्डिङमा परेको कुरा नयाँ रहेन ।
राजेश , भुवन , शिब र निखिल उप्रेतीपछि सबैभन्दा धेरै आफनो मार्केट भ्यालु बनाएको अनमोल एकमात्र हुन भन्ने फिल्मी पण्डितहरुको भनाई रहेको छ । पछिल्लो समय बलिउड फिल्ममा समेत अनुबन्धित भएका अनमोललाई उनकै स्टारडमको कारण पनि मेघास्टारको उपाधी दिएका छन् । तर के अनमोलले ५ वटा व्याक टु व्याक हिट फिल्म दिए भन्दैमा यतिचाडै उनलाई मेघास्टार बन्न मिल्ला ?
यसबारेमा एक मिडियासंग बोल्दै कुनै समयका चर्चित नायक रमेश उप्रेती र नायिका बिपना थापाले अनमोल मेघास्टार नभएको बताएका छन् । ‘ब्रासलेट’बाट कमव्याक गरि पछिल्लो समय ‘एश्वर्य’ फिल्म निर्माण गरी अभिनय पनि गरेका रमेश भन्छन् “सुपरस्टार , मेघास्टार भनेको ठुलो पदवी हो । अनमोल अहिले स्टार हुन तर सुपरस्टार , मेघास्टार होईनन् तर अनमोल सबैको मनमा बसेको नायक हुन् । सुपरस्टार र मेघास्टार जस्तो पदलाई त्यती हल्का नबनाउँ” ।
रमेशको भनाईमा सहमती जनाउँद बिपनाले पनि अनमोललाई अहिले नै सुपरस्टार , मेघास्टार भन्ने बेला नआएको बताईन् । उनी भन्छिन् अनमोललाई अहिले नै यो उपाधी नदिनुस उसलाई त्यो चिज धान्न गाह्रो हुन्छ । अनमोल प्रिजेन्ट स्टार हो । उसलाई अझै अगाडी बढ्न दिनुस ।यसो भनिरहँदा रमेश र बिपनाले कतै भुवनको मन त दुखाएनन् ?
‘अहिले गाउँगाउँमा सिंहदरबार हैन भ्रष्टचार गयो ,‘अब भ्रष्टचार विरुद्ध नयाँ शक्ति पार्टीले काम गर्छ ’